Waqtiga Akhriska: 7 daqiiqo Waxyaabaha weli waxaa laga yaabaa in yar oo qabow ah hareeraha waqtigan, laakiin Carnival Nice yahay Hubi in aad aad u kululee! Riviera-ka Faransiiska waxay abuurtaa dhacdo u gaar ah halkaas oo ku dhowaad hal milyan oo soo booqdeyaal ah oo ka kala socda adduunka oo dhan ay ku qulqulaan magaalada Nice. Nice Carnival waa mid ka mid ah kuwa ugu badan…
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Haddii aad la qorsheynayo safar si Amsterdam laakiin weli gartaan waqtiga ugu wanaagsan si ay u tagaan, laga yaabaa in aad rabto in aad ka fiirsan booqasho inta lagu guda jiro Restaurant Week 2019 Netherlands. Toddobaadka makhaayada waa dhacdo cunno karis ah oo sanad walba ka dhacda adduunka oo dhan…
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo In this post, waxaan isku dayi doonnaa inaan wax badan ka ogaano Booqashada Tikidhada Tareenka Maxalliga ah. Marar badan, socotada u muuqdaan in ay sugaan ilaa daqiiqada ugu dambaysa ka dibna jartaan tigidhada ay. Tayaasha tigidhada tareenka daqiiqadii ugu dambeysay wax caqliga leh inay sameeyaan ma aha. Maqaalkani waxa uu…